ओलीले होइन, ओलीसँग स्पष्टीकरण मागिन्छः घनश्याम भुसाल - EKalopati
ओलीले होइन, ओलीसँग स्पष्टीकरण मागिन्छः घनश्याम भुसाल
चैत्र १०, २०७७
नेकपा सिंगो भएको वेला पार्टीभित्रैबाट केपी ओलीको राजीनामा माग भइरहेको थियो, त्यतिवेला तपाईंले ओलीजीलाई खाली खुट्टा हिँडाउँदै बालुवाटारबाट बालकोट पठाइनेछैन भन्नुभएको थियो । तर, तपाईंहरूलाई पार्टीबाट खाली खुट्टा पठाउने तयारी भएजस्तो देखिन्छ । अहिले सोधिएको स्पष्टीकरणले के संकेत गर्छ ? तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के छ ?
यो नेता हिँडाउने होइन, विधि र विधान हिँडाउने प्रपञ्च हो । हिजो ओलीजीले संसद्समेत हिँडाउने, त्यसमार्फत संविधान हिँडाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । अहिले विधान र त्यसमार्फत पार्टी नै हिँडाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ । यसर्थमा यो चानचुने विषय होइन । संसद् र संविधानविरुद्ध देशभित्र र बाहिरका सेटिङका साथ उहाँले जे षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो, त्यसमा चोट खाएर निस्कनुभएको छ । त्यसैले उहाँले त्यसको बदला हामीसँग लिन खोज्दै हुनुहुन्छ । किनकि उहाँको यात्रामा हामीले अवरोध गरेका थियौँ । संसद् विघटनविरुद्ध सबै पार्टीहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सबैभन्दा सुरुमा त हामी नै उभियौँ । सुरुमा हेर्दा यो नेकपाभित्रको मुद्दाजस्तो मात्रै देखिएको थियो । पछि आएर सबै नागरिकको मुद्दा बन्यो, खासमा लोकतन्त्रकै प्रश्न बन्यो । सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिएपछि उहाँको षड्यन्त्र असफल भयो । त्यसको बदला अहिले लिँदै हुनुहुन्छ । त्यसका लागि एमाले विभाजन गर्न उद्यत् हुनुहुन्छ । अहिलेको व्यवस्था भत्काउने उहाँको उद्देश्य हो । त्यसका लागि उहाँले स्पष्टीकरण माग्नुभएको छ, यो ठूलो विषय होइन । तर, आगामी स्वयं सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र उहाँले उपयोग गर्न सक्ने सत्ताका सारा संयन्त्र दुरुपयोग गर्दै जानुहुन्छ । त्योचाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
तपाईंहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर चेतावनी दिने वा तर्साउने मात्रै हो कि कारबाहीको तहसम्म जाने तयारी छ ? तपाईंहरूसँग जानकारी के छ ? मूल्यांकन के छ ?
उहाँ के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न भनेर अनुमान गर्न नसकिने पात्र हो । हामी जोसुकैले सोच्ने सीमाभन्दा उहाँ अझैँ पर पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सजिलै । हामीले अहिले सोच्दा संविधान कानुन, समाज, मर्यादा, परम्परा, मूल्य र मान्यताभित्र रहेर बदमासी नै भयो भने पनि यतिसम्म होला भनेर सोच्छौँ । तर, उहाँ सधैँ त्योभन्दा पर पुग्नुहुन्छ । त्यसैले अब के गर्नुहुन्छ ? भन्न सकिँदैन । तर, निःसन्देह के भन्न सकिन्छ भने उहाँले अब धेरै चिज भत्काउनुहुन्छ । उहाँले त्यो वामएकता, गठबन्धन, हाम्रो बहुमत, जनताको आशा र विश्वास, स्थिरतातर्फको यात्रा सारा भत्काउनुभयो । अब बाँकी एउटा छ, नेकपा एमाले । त्यो पनि भत्काउन लागिराख्नुभएको छ । रोममा दासहरूले वेलावेलामा विद्रोह गर्थे र मालिकहरूले सयौँको संख्यामा ती विद्रोहीहरूलाई किलोमिटरको दूरीमा बाटोभरि झुन्ड्याउँथे । र, तिम्रो हालत यस्तै हुन्छ भनेर अरूलाई सुनाउँथे । उहाँले अहिले गर्न खोजेको यही हो । संसारमा जोसुकै होस्, त्यो आफ्नो प्रशंसक र चाकर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता, दर्शन, विश्वास र सिद्धान्त उहाँको छ । जो चाकर हुन स्वीकार गर्दैनन्, ती सबै शत्रु हुन्् । चाकरहरूलाई आदेश गरिन्छ र शत्रुहरूलाई बदला लिइन्छ । उहाँले हामीलाई शत्रु ठान्नुभएको छ, त्यसैले बदला लिँदै हुनुहुन्छ । किनभने हामीले नेकपा एमाले नभत्काऊँ भनेका छौँ । मैले नेकपा एमालेलाई दक्षिण एसियाकै राम्रो पार्टी भन्ने गरेको थिएँ । कांग्रेसकै साथीहरूले पनि केही वर्षअघि स्विकार्थे । हामी आज त्यो पार्टी नभत्काऊँ, नबिगारौँ, एकता बचाऊँ भनिरहेका छौँ । उहाँ भत्काउन लागिरहनुभएको छ ।
तपाईंलगायत चार नेताबाट जुन स्पष्टीकरण मागिएको छ, त्यसको जवाफ दिने कि नदिने ? कसरी दिने ? के तयारी भइरहेको छ ?
हामीले उहाँलाई स्पष्टीकरण त के दिनु छ र ! उहाँ नै वैध होइन । किनभने उहाँले कथित संशोधित विधानअनुसार हामीलाई यो पत्र लेख्नुभएको छ । विधान उहाँले संशोधन गरेँ भन्नुभएको छ । पार्टीको विधान संशोधन हुन सक्छ, तर त्यो विधान अधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ । तर, उहाँले गुटको भेला गरेर विधान संशोधन गरिदिनुभयो । महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो । नेकपा एमालेको विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने व्यवस्था नै छैन । उहाँ त्यस्तो समितिको अध्यक्ष हुनुभएको छ । त्यो अवैधानिक हो । उहाँको अध्यक्ष पदसमेत अवैधानिक हो । अवैधानिक हैसियतबाट उहाँले स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । एमालेको विधानले उहाँलाई चिन्दैन । हिजो असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन हुँदा हामीले पुनस्र्थापना माग गरेका थियौँ । आज अवैधानिक रूपमा विधान संशोधन हुँदा हामीले पूर्ववत् केन्द्रीय कमिटीको माग गरेका छौँ । हामी वैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा छौँ, तर उहाँ भत्काउने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसैले हामीले उहाँलाई स्पष्टीकरण दिने होइन । बरु हामीले नै उहाँसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने धेरै मुद्दा छन् । जसबारे हामीले उहाँसँग पक्कै सोध्नेछौँ ।
विराटनगर विमास्थलमा बाढी पसेपछि सवै उडान रद्द
दशैमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग हेर्ने कसले ?
नेपाल स्थित राजदूतावासले पठायो दशैको शुभकामना : सम्पादकहरुलाई रक्सी उपहार
दशैंको टीका : पूर्णिमासम्म टिका लगाउन सकिने
Previous articleथ्री नेसन्स कपमा तीन देश भिड्ने , खेल दशरथ रंगशालामा
Next articleअछाममा भिरबाट लडेर बालिकाको मृत्यु
सम्वाददाता - कार्तिक ३, २०७८ 0
विराटनगर । आईतबारदेखि निरन्तर परेको वर्षाका कारण मुलुकभरको जीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । बर्षाका कारण बाढी पहिलोले बस्ति डुवानमा मात्र परेका छैनन्...
सम्वाददाता - अशोज २९, २०७८ 0
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाको मापदण्ड बनाएको भएपनि त्यस्तो सुविधा मापदण्ड विपरित प्रयोग गर्ने गरिएको पाईन्छ । सरकारले सचिव,...
काठमाडौं । यतिखेर नेपालीहरुको महान चाड दशैं भव्य रुपमा देशभर मनाईरहेका छौं । करीव एकसाता लामो सार्वजनिक विदा सरकारले दिएको छ ।...
काठमाडौं । शुक्रबार मान्यजनबाट टीका, जमरा तथा प्रसाद ग्रहण गर्दै हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान पर्व वडादशमी मनाइएको छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले...
महाअष्टमीमा खसी र छोरा दुवैलाई छप्काएका निमबहादुरको कथा
सम्वाददाता - अशोज २८, २०७८ 0
सल्यान । महाअष्टमीमा खसी र छोरा दुवैलाई छप्काएका निमबहादुर एक बाबु हुन् । नेपालमा यस्तो प्रतिनिधि घटना यदाकदा घटिरहेका हुन्छन् । मासुको...
सम्पादक : वीपी भण्डारी